Mgbasa Ozi N'ogbe Etiti 5x10m PE Mmemme Ntinye Tlọikwuu na Greenhouse | Winsom
$ 199,00 $ 189,00 $ 179.00
Tentlọ oriri na ọ idealụ partyụ a dị mma maka emume ọ bụla dị n'èzí, dịka ihe ngosi, agbamakwụkwọ, oriri na oriri. Nwekwara ike wụnye ya n'azụ ụlọ gị ka ọ bụrụ nnukwu anwụ na-acha anwụ anwụ iji mee ndị ezinụlọ gị na ndị ọbịa gị ọbịa.
2) bọtịnụ opupu na nkwonkwo maka nhazi dị mfe na iwelata
3) Ihe mkpuchi elu nke mmiri mkpuchi siri ike, nke anaghị egbochi ya
Nọmba Model WS-P1510
Aha ihe Budget 5x10m PE Event Party tent
Ogo Ahịa 16x32ft (5x10m)
Ibu ibu 122kg
16x32ft (5x10m) Drawing ọkọlọtọ
Iji ya ememme ọzọ, agbamakwụkwọ ma ọ bụ BBQ iji gbanwee ọnọdụ ọ bụla ịbụ ihe omume pụrụ iche! Gbanwee nnọkọ nkịtị na ihe pụrụ iche na-atọ ụtọ ma na-eme oriri na ọ andụ partyụ ahụ.
Ulo ụlọ na akụkụ ya nke mmiri na-eguzogide mmiri PE na-eguzogide mmiri na-enye ohere maka nhicha dị mfe ma zere ihe ndị siri ike ihu igwe.
Ihe mkpuchi nke wavy ጠርዝ na-enye gị nhọrọ ọzọ. Ihe mkpuchi gbara gburugburu n'akụkụ akụkụ na-eme ka ụlọikwuu ahụ ghara ịdị jụụ ma nwee ntụkwasị obi, na-eji brik, sandbag ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị n'akụkụ n'akụkụ iji mee ka nkwụsi ike dịkwuo mma.
O nwere oghere mbughari, zipure na windo PE iji mee ka ikuku na ọkụ juo. Can nwere ike gbasaa mechiri emechi iji mechie ụzọ maka oghere emechiri.
Ọdịdị triangle pụrụ iche, na-eme ka okpokoro ụlọ dị n'elu kwụsie ike & kwụsie ike. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka oriri na nnọkọ oriri na ọdoorụ outụ maka ọnụ ụlọ ya sara mbara.
Extralọ a nnukwu ụlọ oriri na ọ partyụ partyụ ndị a buru ibu nwere ihe ndị e ji ígwè rụọ maka ike dị elu na nzere. Anyị jiri bọtịnụ opupu ihe ubi na ụkwụ nchara na ntigbu nke na-eme ka ụlọikwuu ahụ bụrụ ihe na-adịgide adịgide, ịnọ ọdụ na iguzosi ike. Umu ahihia ndị ahụ ekpebiela ụzọ ha ga-esi kegide eriri ụyọkọ ahụ ma jiri grommets na-eme ka ihe ọ bụla ghara imebi ngwa ngwa. Cordọ ụyọkọ ndị ahụ dị mfe iji kegide oghere ndị ahụ wee kechie mkpanaka ígwè iji mezie.
Nke gara aga: Mpempe ụgbọ ala ụgbọ ala nwere ike ị nweta ihe mkpuchi mmiri 10′x20 ′
Osote: Walkx in Tunnel plastic Greenhouse Agriculture 3x6m
6x12m Udiri Ibe Anya PVC Ememe Nguputa Ndi Fi…
Entslọikwuu Maka Ihe Mmepụta N'ogbe 6x12m